Sinoan'i Soamahamanina: tsy hitrandraka volamena fa hamboly... - Vaovao farany
Home / mananasy / sinoa / Soamahamanina / Sinoan'i Soamahamanina: tsy hitrandraka volamena fa hamboly...
Sinoan'i Soamahamanina: tsy hitrandraka volamena fa hamboly...
Vaky ny resaka nafenimpenina, i Solofo Ramirio na Solofo Kadradraka, araky ny fiantson'ny olona azy, lehilahy havanana amin'ny fitsikilovana ao Soamahamanina no nahatontosa an-tsakany sy an-davany ny iraka nampanaovin'ny fokonolona azy ka nahazo izao vaovao izao. Fantatra àry fa kamiao folo feno lohana mananasy vonona hambolena no afenina ao.
Sary tanaty finday noraofin'i Solofo nandritry ny fitsikilovana nataony.
"Gaga tokoa izahay fa hatramin'ny nahatongavan'ireo kelimaso ireo dia misy fofona ranom-boakazo mamerovero eto an-tanàna eto, nefa lazaina fa hitrandraka volamena no antom-pisian'ireo aty. Dia diso ve izahay raha hanadihady?" hoy ny renim-pianakaviana iray, ary notohizany hoe : "Tsy azoko mihitsy hoe inona no antony hambolena mananasy, tsy aleo ve mampianatra kung fu?".
Sinoan'i Soamahamanina: tsy hitrandraka volamena fa hamboly... Reviewed on juin 30, 2016 Rating: 5
mananasy X sinoa X Soamahamanina